बच्चालाई स्तनपान गराइराखेका आमाले गर्भनिरोधक चक्की खान हुन्छ ? | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepalबच्चालाई स्तनपान गराइराखेका आमाले गर्भनिरोधक चक्की खान हुन्छ ?
Home स्वास्थ्य बच्चालाई स्तनपान गराइराखेका आमाले गर्भनिरोधक चक्की खान हुन्छ ?
बच्चालाई स्तनपान गराइराखेका आमाले गर्भनिरोधक चक्की खान हुन्छ ?
अहिले धेरै दम्पतीका लागि, ‘एउट सन्तान, पुगिसरी’ भनेजस्तै भएको छ । कतिले दुई जनासम्म सन्तानको योजना बनाउँछन् । तर, धेरै सन्तान जन्माउने कुरामा सर्तक हुन थालिएको छ । किनभने धेरै सन्तानलाई उचित पालन-पोषण गर्न अहिले असंभव बन्दै गएको अवस्था छ ।
यस्तो अवस्थामा सन्तानका रहर पुरा भइसकेकाहरु दोस्रो गर्भ रहन दिदैनन् । यदी गर्भ रहेमा यस्ता अनिच्छित गर्भ तुहाउने गरिन्छ । यसका लागि शल्यक्रिया वा औषधी दुवै विधी प्रयोग गर्ने विकल्प छ ।
त्यस्तै अनिच्छित गर्भबाट बच्नका लागि विभिन्न किसिमको साधनको प्रयोग गर्न सकिन्छ । आपतकालिन पिल्सहरु पनि प्रचलनमा छन् ।
तर, जब एउटा सन्तान जन्मन्छ, त्यस अवस्थामा आमाले शिशुलाई स्तनपान गराइरहेका हुन्छन्, के त्यस्तो अवस्थामा पनि गर्भनिरोधक औषधी सेवन गर्नुहुन्छ ?
भनिन्छ, शिशुको लागि आमाको दुध अमृत समान हो । त्यही दुधबाट उसले सम्पूर्ण पोषण प्राप्त गर्छ । त्यसैले आमाको खानपान र उनीहरुको स्वास्थ्य स्थितीले बच्चाको पोषण र स्वास्थ्यमा धेरै प्रभाव पार्छ । यसै कारण चिकित्सकहरुले बच्चालाई आफ्नो गराउने आमाहरुलाई स्वस्थ आहार लिन सल्लाह दिन्छन् ।
स्तनपान गराइराखेको अवस्थामा आमाले सेवन गर्ने औषधिहरुको असर शिशुलाई पनि पर्छ । यस्तो बेलामा खाने गर्भनिरोधक चक्किहरुको असर बच्चामा पर्छ वा पर्दैन भन्ने कुराको चिन्ताले हरेक आमाहरुलाई सताउँछ ।
हालसालै गरिएका केही अध्ययनहरुका अनुसार स्तनपानको क्रममा गर्भनिरोधक चक्कीहरुको असर बच्चालाई स्तनपान गराइने दूधको उत्पादनसँग जोडिएको छ । त्यसैले बच्चाको स्वास्थ्य राम्रो रहोस् र उनीहरुले स्वस्थ दूध खान पाउन भनेर महिलाहरुलाई गर्भनिरोधक चक्की नखाने सल्लाह दिइन्छ ।
स्तनपान प्राकृतिक गर्भनिरोधक
केही अवस्थामा स्तनपानले पनि गर्भनिरोधकको काम गर्छ । बच्चा जन्मिएपछि बच्चालाई स्तनपान गराउने महिलाहरुमा महिनावारी सुरु भएन भने उनीहरुलाई कुनै गर्भनिरोधक चक्कीको आवश्यकता पर्दैन ।
स्तनपान गराउने महिलाहरु यदि यी चक्कीहरुको सेवन गर्न चाहन्छन् भने आफ्नो चिकित्सकको सल्लाहमा मात्रै औषधि सेवन गनुपर्छ । जसले स्तनपानको क्रममा बच्चालाई कुनै नोक्सान हुँदैन ।
खासमा यस्ता औषधिहरुमा हार्मोनहरु हुन्छन् जसले दूधको माध्यमबाट बच्चाको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर गर्न सक्छ ।
गर्भनिरोधक चक्कीहरु खान पहिले यी कुराहरुमा ध्यान दिनुहोस्
१. पहिलेदेखि नै गर्भनिरोधक चक्कीहरु खाइरहनुभएको छ भने बच्चा जन्मिएपछि आफैले यसलाई दोस्रोपटक सुरु नगर्नुहोस् । यस बारेमा पहिले आफ्नो चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस् ।
२. यी औषधिहरुको सेवन गर्नाले दूध कम भयो भने ढिलो नगरिकन चिकित्सकलाई बताउनुहोस् ।
३. चक्कीहरुको सट्टा गर्भनिरोधकलाई अर्को तरीकाले प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ ।
४. थाइराइड जस्ता रोगहरुबाट पीडित हुनुहुन्छ भने चक्कीहरु खानु पहिले चिकित्सकहरुलाई आफ्नो स्थितीको बारेमा अवगत गराउनुहोस् ।
इन्डोनेसिया: भूकम्प र सुनामीमा परी मृत्यु हुनेहरूको संख्या ८ सय ३२ पुग्यो
सलमानले कुनै पनि फिल्ममा ‘किस सिन’ नदिनुको कारण यसरी खुलाए